निक्कीको अमेरिकी लाईफ (भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
निक्कीको अमेरिकी लाईफ (भिडियो सहित)
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, हङकङ
नेपाली लाईफको अमेरिकी लाईफ शृंखलाको तेश्रो कथामा यूट्यूबबाट आफ्नो प्रतिभा संसारभर फैलाउँने निक्की (नुशांसी कार्की) र उनको परिवारको अमेरिकी अनुभव समेटेका छौ।
नेपालमाहुदै सानैदेखी गीत गाउँन थालेकी उनी सन् २०१२ देखि बुबा-आमा र बहिनी निश्माका साथ अमेरिका, क्यालिफोर्नियाको सनफ्रान्सिस्कोमा बस्दै आएकिछिन् । भीडियोमा निक्कीको यूट्यूब र गायनको सफल यात्रासँगै उनका बुबा शंकर र शुसीला कार्कीको अमेरिकी जीवन अनुभव र छोरीको गायकीको बारेमा उहाँहरूको भनाई पाउँनु हुनेछ ।
१५ वर्षमै अमेरिका पुगेकी उनि गीत गाएर आफैले यूट्यूबमा अपलोड गर्न थालेपछि चर्चित हुदै गईन् ।छोटो समयमै उनको ख्याति चुलियो । २ वर्ष भित्रमै यूट्यूब सेलिब्रिटी बनिसकेकी थिईन् । त्यस यता निक्की गायकी र स्थानीय स्टेज कार्यक्रमहरूबाट संसारभरका नेपालीमाझ पुगिरहेकी छन्।
काराओकेमा गाएर यूट्यूबमा अपलोड गरेका नेपाली, हिन्दी गीतहरुबाट चर्चित हुँदै गएकी निक्कीले चर्चित नेपाली गायक-गायिकाहरूसँग स्टेज प्रस्तुति पनि दिइसकेकी छन्। यूट्यूबबाटै निक्कीको प्रतिभा थाहा पाएका नेपाली संघ–संस्थाले उनलाई आफ्ना कार्यक्रमहरुमा बोलाउन थालेका थिए। पछि उनीअमेरिका बाहिरका देशहरूसम्म गीत गाउँन पुगिन् ।
काठमाडौं, कोटेश्वरकी निक्की अमेरिका जानुभन्दा अघि ब्रुकफिल्ड स्कूलका कार्यक्रम र रातो बंगला स्कूलको छन्द कविता वाचनमा सहभागी हुन छुटाउँदिनथिन्। तीन वर्षकै उमेरमा गीत गाउन थालेकी उनले अमेरिका जानुअघि एक वर्ष शास्त्रीय संगीतकी गुरु संगीता प्रधानसँग संगीतको प्रशिक्षण पनि लिएकी थिइन्। भक्तराज आचार्यको स्वरको जहाँ छन् बुद्धका आँखा…, अरुणा लामाको पोहोर साल खुशी फाट्दा…, सपनाश्रीको हेरेको तिमीलाईआँखाले हैन…., तारादेवीको उकाली ओरालीहरुमा…, आशा भोस्लेको झझल्को लिएर आउँछ…, जस्ता गीतहरुमा उनको गायकी जमेको छ।
लता मंगेश्करदेखि कविता कृष्णमूर्ति र सोनाली ठाकुरसम्मका लोकप्रिय हिन्दी गीतहरु काराओकेमा गाएर यूट्यूबमा राखेकी निक्कीको गलाले नेपाली गीत–संगीतमा एउटा सम्भावनाको संकेत गरेको छ। उनले गाएका ५ दर्जन भन्दा बढी नेपाली र हिन्दी गीत यूट्यूबमा हेर्न सकिन्छ (हे. लिङ्कः youtube.com/channel/UCzlV9dVDxDN4eJ6BpKKjsMQ) । अरुको गीत यूट्यूबमा गाएर सबैको मन जितेकी ऊनले अमेरिकामै बसेर ‘हैन भन्देउन…’, ‘जेट ऊडाउँछु घुई घुई…’ जस्ता आफ्नै स्वरमा हिट गीत गाईसकेकी छिन् ।
नेपाली फिल्महरूका लागी गाउँने र देश बिदेशबाट आउने स्टेज शो को धेरै प्रस्ताव अमेरिकी बसाई र समय अभावले छाड्न परेको उनको अनुभव छ ।
निक्कीसँग भेट, एउटा संयोग !
मल्टी मिडियाकाे प्रयोगबाट आफ्नो प्रतिभाको बलमा चम्किएकी निक्कीको गायकी यूट्यूबमा देखेरै मैले सन् २०१४ को अप्रिलमा हिमाल खबरपत्रिकाको लागी ऊनको बारेमा लेखेको थिए । त्यसबेला फेसबुक मार्फत उनका बुबा शंकर कार्कीसँग सम्पर्क गरेर मेलै उनीसँगकुरा गरेको थिए । त्यसको एक वर्षपछि सुरू भएको मेरो अमेरिका यात्राको पहिलो गन्तव्य क्यालिफोर्नियाको सनफ्रान्सिस्को थियो ।
२०१५ सेप्टेम्बरको पहिलो साता अमेरिका ओर्लीएर मैले फेसबुकको वालमा ‘गुड् मर्निङ् सनफ्रान्सिस्को !’ भनेर स्टाट्स पोष्ट गरे लगतै म्यासेन्जरमा कल गरेर निक्कीले भनिन् ‘दाई तपाई कहिले सनफ्रान्सिस्को आउनुभएको ? तपाई कहाँ हुन्छ ? म बस्ने पनि सनफ्रान्सिस्कोनै हो नि ! कहिले समय हुन्छ भेट्नु पर्छ है ।’ उनको यो कल मेरो लागी ‘सरप्राइज़’ थियो ।
लगतैको आईतबार निक्की र उनको परिवारसँग भेट भयो । । साथी जसकुमार राइ र मलाई निक्की र उनको बुबाले सनफ्रान्सिस्को बे एरिया, बजार घुमाए नै घरैमा न्यानो आतिथ्य प्रदान गरे। अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको कथा खोज्दै हिडेको मेरा लागी यो परिवारसँगको भेट मिठो संयोग थियो ।
साथी जसकुमार र मेरो क्यामराले यो परिवारको अमेरिकी जीवनसँगै निक्कीको गायकी र यूट्यूब सेलिब्रिटीसम्मको यात्राको अनुभव कैद गर्यो। ४ वर्ष अघि खिचीए पनि निक्कि र ऊनको परिवारको यो कथा अहिले पनि हेर्दा सान्दर्भिक नै पाउँनुहुनेछ । सुरूमा बहिनी निश्माको सहयोगमा घरमै जसो तलो भीडियो बनाएर अपलोड गर्ने उनका स्टुडियोमा रेकर्ड गरेको गीत र भिडीयो मेकिङ् पनि अब्बल छ । उनको आफ्नै गीतका म्युजिक भीडियोहरू समेत निक्कै रूचाईएको छ । ‘नेपाली लाईफ ‘ यूट्यूब च्यानलमा अमेरिकाको नेपाली लाईफको एउटा श्रृंखलाको यो तेश्रो कथा हो ।
२ महिना लामो अमेरिका यात्राका क्रममा मैले आफुले देखेका, भेटेका नेपालीहरूको जीवनलाई क्यामरामा कैद गर्नुको उद्देश्य थियो त्यहाँको नेपालीजीवनलाई एउटा वृत्तचित्रमा प्रस्तुत गर्ने रहेको थियो । तर, डकुमेण्ट्री बनाउँदा सिमीत ‘टाईम फ्रेम’मा सबै कथा अटाउन सम्भव हुदैन। तर, यूट्यूबको यो ‘प्लेटफ़ॉर्म’मा सबैको कथा अलग अलग प्रस्तुत गर्न सकिने भएपछि यो श्रृंखलाको सुरूवात भएको हो । साथी जसकुमार र मैले खिचेको भीडियो फ़ुटेजलाई सम्पादनमा राजेन्द्र खड्काको सहयोग रहेको छ । अमेरिकाको नेपाली लाईफको श्रृंखलाको यो कथा कस्तो लाग्यो सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला । यस च्यानलको भिडीयो मन परेलाईक, शेयर र सस्क्राईब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ । यूट्यूब च्यानल र भीडियोग्राफी मेरो लागी नयाँ क्षेत्र हो । नयाँ अनुभवसँगै हरेक दिन सिक्ने काम जारी छ। – Enepalese